प्रदेश सभा सदस्यका नाममा खुलापत्र : (सन्दर्भ प्रदेश नामांकरण)
प्रदेशसभा १ देखि ७
विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, पोखरा, वुटवल, सुर्खेत, धनगढी
बधाई छ ! संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रदेशसभा सदस्य जस्तो गरीमामय पदमा निर्वाचित हुनु भएकोमा कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि । संवैधानिक ईतिहासमा संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७३ ले देशलाई नयाँ स्वरुप र संरचना दिएको छ । ७ दशकको लामो संघर्ष र वलिदान पछि स्थापित राजनैतिक निकायको सम्मानित संस्था पहिलो प्रदेशसभामा सुनौला अवसर बोकेर ऐतिहासिक जिम्मेवारी साथ कार्यभार सम्हाल्न जनादेश पाउनु भएको छ । विश्वमानचित्रमा सगरमाथा मुनिरहेको धनिदेशका गरीब जनता भनाईका साथै संसारका अति कम विकसित देशको सूचीमा रहेको प्यारो नेपालको भाग्य र भविष्यकोर्ने जिम्मा अब तपाईलाई सम्पेका छन् जनताले ।
तपाईको सोच, ईमान्दारी, परिश्रम र समर्पणमा नै देशको उज्ज्वल भविष्य छ । सन्दर्भ केन्द्रित हुन आग्रहका साथै तपाईको मन मस्तिस्कमा भएकै कुरालाई पुनः एक पटक स्मरण गर्न अनुरोध गर्दछु । ३ करोड नेपाली मध्ये जिविकाको लागि मात्रै झण्डै १ करोड नेपाली विदेशीएको अवस्था हो । गत ७ दशकको कालखण्ड ज्यादै उतारचढावको रह्यो । क्रान्ति, विद्रोह, आन्दोलन, बन्द, हडताल, संविधान लेखन, संशोधन, खारेज गर्दागर्दै अस्तिरताकै भूमरीमा घुमिरह्यो नेपाल ।
यतिखेर प्रदेशसभाको अधिवेशनमा व्यस्त हुनुहुन्छ । तपाईका अगाडि तमाम एजेण्डा छन् । प्रदेश नामाकरण र राजधानी तोक्ने कार्य प्रदेश सभाको नियमित कार्य नभएर विशिष्ट कार्य हो । प्रदेश राजधानी अस्थायी रुपमा तोकी सकिएको छ । राजधानीका लागि त स्थान तोक्ने काम मात्र हो । प्रदेशको नाम तोक्दा गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गर्नु जरुरी छ । एकपटक एक निर्णय गरेपछि सदाका लागि सम्पन्न हुनेछ । चेतनशील सम्पूर्ण नेपालीको अत्यन्त चासोको विषय बन्नका साथै नामाकरण पछि विश्वकै राजनैतिक क्षितिजमा आँशिक भए पनि नयाँ परिवेश थपिने हुादा यस कार्यको गरीमा आँकलन गर्न विशाल हृदय चाहिन्छ जो तपाई सङ्गै छ ।
नामाकरण बारे तपाईकै चिन्तन मननमा सघाउ पुगोस् भनेर केही बुँदा र नाम उल्लेख गर्न चाहन्छु । नाम एक अर्कासँग जुध्ने हुनु हुँदैन । कम अक्षरको सकेसम्म दुई अक्षर, तीन अक्षर, बढीमा चार अक्षर भएपनि एउटै झोक्कामा उच्चारण हुने शब्द रचनाको नाम उत्तम हुन्छ । उच्चारण गर्न सजिलो, प्रदेशवासी सबैको मनोवल उच्च राख्ने, समताभाव दर्शाउने, भौगोलिक ऐतहिासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सदभाव कायम राख्ने, आमजनताले सजिलै पहिचान गर्न सक्ने, भविष्यको कुनै पनि कालखण्डमा विवादको विषय नबन्ने, प्रकृतिमैत्र, शान्ति र समृद्धिलाई आत्मसात गर्ने भाव झल्कने, नामबाट आफ्नो प्रदेशलाई साक्षात्कार गराउन ७ वटै प्रदेशका सौभाग्यशाली माननीय प्रदेश सभासदज्यूहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्नका साथै प्रदेशका केही सम्भावित नामहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
प्रदेश सम्भावित नाम
१ विराट वा कोशी वा पूर्व (Eastern)
२ मिथिला वा मदेश
७ खप्तड वा मलास वा गोदावरी वा पश्चिमी (Western)
– पत्र लेखक
केशव राज जोशी, पूर्व प्राचार्य - महाकाली उ.मा.वि. बेलौरी, कञ्चनपुर ।